Kushuvira: Kukwidziridzwa Kugadzirisa, Kukurudzira, uye Kuwedzera Performance Yako Yekutengesa Chikwata | Martech Zone
Chitatu, Kurume 17, 2021 Chitatu, Kurume 17, 2021 Brian Trautschold
Kuita kwekutengesa kwakakosha kune chero bhizinesi riri kukura. Neboka rekutengesa rakabatanidzwa, vanonzwa vachikurudzirwa uye vakabatana nezvinangwa zvesangano nezvinangwa. Izvo zvakashata zvinokanganisa zvevashandisi vasina basa pasangano zvinogona kuve zvakakosha - sekushomeka kwekugadzira, uye kutambisa tarenda uye zviwanikwa.
Kana zvasvika kune timu yekutengesa zvakanyanya, kushomeka kwekuita kunogona kudhura mabhizinesi akananga mari. Mabhizimusi anofanirwa kutsvaga nzira dzekushingairira kutengesa zvikwata, kana kuisa njodzi kuvaka timu isiri kuita ine goho rakaderera uye huwandu hwehuwandu hwehuwandu.
Chido Chekutengesa Management Platform
vavariro ndeyekutengesa manejimendi chikuva inoenderana neyese dhipatimendi rekutengesa, dhata sosi, uye mashandiro emitambo pamwechete kuita imwechete nyore system. Chido chinopa kujekesa uye inoratidza chaiyo-nguva yekuita analytics yemasangano ese ekutengesa.
Uchishandisa yakapusa kudhonza-uye-kudonhedza interface, kunyangwe asiri-ehunyanzvi vatengesi vatengesi vanogona kugadzira echinyakare makadhi, makwikwi, mishumo, uye zvimwe. Hedzino dzimwe nzira shoma vatungamiriri vekutengesa vanoshandisa Ambition mune yavo tech stack.
Tora Peloton woichinja kuti ive software yezvikwata zvekutengesa uye iwe une Ambition --– inokurudzira yekudzidzisa inosanganisirwa neyemabhodhi bhodhi. NePeloton, vatasvi vanogona kuona pavanomira mukati mekutasva vachiwedzera zvavanobuda. Kubudikidza neApple's software yekumisikidza, vatungamiriri vekutengesa vanogona kugadzira chiitiko chakafanana nemitambo yekufungidzira, maTV anotengesa, mabhodhi ekutungamira uye maSpIFF ekubatsira kutyaira zvine mutsindo musangano.
Gamification yave iripo kwemakumi emakore, mune imwe nzira kana imwe. Vatengesi zvikwata vakawana kukosha mukugadzira zvinokurudzira uye kukurudzira makwikwi kuumba yakakwira kubatanidzwa uye zvinokurudzira mazinga pakati pevamiriri. Mushure mezvose, ndiani asingade zvishoma zvemakwikwi?
Kukurudzirwa nekukurumidza kuchinjira kuenda kubasa kure, gamification yakashanduka kubva ku "yakanaka-kuva-kuva" kuenda kune "kuda-kuva-kuva". Kuzvidavirira pakati pezvikwata kwatova kwakatonyanya kukosha sezvo zvikwata zvekutengesa hazvisisiri panzvimbo yekutengesa. Gamification inogona zvakare kupa vatungamiriri vekutengesa ruzivo rwekuti vanoita sei reps pavanenge vachishanda kubva kumba uye vachivatendera kukurudzira kukwikwidza kune hutano.
Kutengesa Coaching Software
Sales coaching ndiyo inonyanya kukanganisa lever inotungamira inofanirwa kuwedzera mashandiro emutengesi uye ,zve, inokanganisa timu yekutengesa yakazara. Hazvina mhosva kuti indasitiri, kutendeuka idambudziko rine mukurumbira mukutengesa, uye mikana yekuvandudza yehunyanzvi inogona kuita chinhu mukukurudzira kwevashandi kuti vagare.
Nematimu haachisiri pauriri, Vatungamiriri vekutengesa havana mukana wekumira padhesiki rep rep uye vobvunza kuti vari sei, ona kwavanoda rubatsiro kana kupindura mibvunzo inosara. Nekudaro, neChido, kutengesa kudzidzisa kunoita kuti zvive nyore kune vatengesi vatengesi sezvavanoramba vachijairira kune kwavo kure mhepo. Kune makambani makuru uye madiki, vatungamiriri vekutengesa vanogona kumisikidza misangano inodzokororwa, rekodhi hurukuro, uye chengetedza zvirongwa zvezviito zvese munzvimbo imwechete. Iko kuchinjika uye chirongwa chakasimba chinobvumira vatungamiriri kuti vagadzire avo mapurogiramu uye vagadzirise misangano inowanzoitika saka, kana hupenyu hwapinda munzira, misangano yakatogadzwa.
Kutengesa Insight uye Performance Management
Boka rekutengesa ndiyo injini inopa bhizinesi rega rega. Kambani yekutengesa yekuita manejimendi manejimendi inofanirwa kutarisa kuchengetedza iyi injini yakachengetedzwa zvakanaka, kudzidziswa kunodzosera pane hunyanzvi hwavanoda kuzadzisa zvinangwa zvesangano uye kuongorora kufambira mberi kwavo sezvavanofambira mberi.
Iine CRM dhijitari yekupa simba kugadzirwa zvibodzwa uye makwikwi, vatungamiriri vekutengesa vanogona kuve nechokwadi chekuti avo reps vari kutema zvese zvavanoita, zvinangwa, uye manotsi pane aripo uye vanogona vatengi. Vatungamiriri vekutengesa zvakare vane kuoneka mune reps 'akapedza mafoni kana maemail, uye akarongwa kana kupedzisa misangano, uye tarisa reps pane yekugadzira quadrant kuona kuti ndiani ari kushandura zviitiko kuita zvinangwa uye mhedzisiro.
Kune vatengesi vatengesi vanotarisa kuti vawane njere mukutengesa kwavo reps 'zuva nezuva kuita, chikuva cheMbavarira chinopa yega yekutengesa rep ine kadhi rechikwangwani inosanganisira zvinangwa zvezuva nezuva. Vatungamiriri vekutengesa vanogona kuona kana rep rep yasara yezuva isina 100% yekupedza chiitiko uye ichivatendera kuronga yekukurumidza kosi yekudzidzisa kubatsira reps kudzoka munzira. Kunyange pasina rudyi nzira yekutarisa mashandisiro anoita vatengesi, uchishandisa yekutengesa mashandiro ehurongwa, seChishuwo, inogona kuona mukana wekuwana data rakavimbika uye kubvumidza vatengesi vekutengesa nevatungamiriri vekutengesa njere dzekugadzirisa maitiro avo.
pamusoro 3,000 vatengesi vekutengesa shandisa Ambition kuti ubatsire kutyaira akawanda mafoni, bhuku mimwe misangano, uye kupemberera mamwe akavharwa madhiri avo ari kure kana mu - hofisi maqembu ekutengesa. Sezvo vatungamiriri vazhinji vekutengesa vari kutsvaga kukonzeresa huwandu hwemapuratifomu avari kushandisa, Kuda anoda kuzviita zvese. Kubva pakutengesa zvekudzidzisa kusvika kumabhodhi epamberi, Ambition inobatsira vatungamiriri vekutengesa kuita zvine hungwaru uye zvine hungwaru zvisarudzo zvinobvumidza timu kuendesa zvirinani-zvinodzorwa zvirinani zvinodiwa kuendesa mhedzisiro.
Chido chakabatana neSalesforce, Slack, Dialsource, Cisco, ringDNA, Velocity, Gong, SalesLoft, Chorus, uye Outreach… Microsoft Matimu ari kuuya munguva pfupi iri kutevera. Kuti udzidze zvakawanda nezve Ambition uye nemabatiro aunoita ako ekutengesa reps:
Ronga Dhivhizheni Demo Nhasi
Tags: chidociscoCRMDialsourcebhizinesi rekutengesagongMicrosoft TeamoutreachringDNAkutengesa gamificationmaonero ekutengesakutengesa manejimendimetrics ekutengesakutengesa kukurudzirakutengesa kuitakutengesa kuita manejimendikutengesa kwekutengesakutengesa kushumakutengesa chikweretiboka rekutengesasalesforceSalesLoftusimbevelocity
Brian Trautschold ndiye mubatanidzwa uye COO pa vavariro, iyo inozivikanwa yekushambadzira manejimendi manejimendi manejimendi akavakirwa e data-anotyairwa uye mamirioni-akasimudzira anotengesa masangano. Batanidza naBrian pa Twitter uye LinkedIn uye tanga hurukuro nezve mimwe yaanofarira misoro: Kutengesa, kutanga, kushambadzira, uye NBA zvekutengeserana makuhwa.
JungleScout: Zvishandiso uye Kudzidziswa Kuvhura Uye Kukura Kwako Kutengesa PaAmazon